စကားပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စကားပုံ
Posted by မမလေး on Oct 14, 2010 in Creative Writing |5comments
၁ . စိုသောလက် မခြောက်စေနှင့် ၂ . တပည့်လိမ်မာ ဆရာ အာပတ်လွတ်သည် ၃ . ဘုရားပြီးက ငြမ်းဖျက်သည် ၄ . မမြင်ဖူး မူးမြစ်ထင် ၅ . ဟောင်လွန်းသာခွေးလူမလေး
Google မှာရှာကြည့်တော့ အဲ့ဒီစာအုပ်မရှိလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ … ဦးဝင်းလှိုင် ရဲ့ စကားပုံတစ်ရာ ပုံတစ်ရာ ( သတမအကြိမ် ၊ 1987 ဂျူလိုင်လ ) အကယ်လို့ သိကြတယ် ရှိကြတယ် ဆိုရင် ဆက်မတင်တော့ပါဘူးလို့ . . .
၁ . စိုသောလက် မခြောက်စေနှင့်
ဆွေမျိုး သင်္ဂဟာများကို စိတ်မပျက်အောင် အစဉ်ဂရုစိုက် ဆက်ဆံသင့်ကြောင်း ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြထားသော စကားပုံ ဖြစ်ပါသည် ။ ( ဆောင်ပုဒ် – မိတ်ဆွေကောင်းမှန် မြဲဆက်ဆံ ၊ ရန်သူမဖြစ်သင့် )
၂ . တပည့်လိမ်မာ ဆရာ အာပတ်လွတ်သည်
ကိုရင်တစ်ပါးသည် ကြက်သားဟင်းဘုန်းပေးရန် ပြင်းပြနေချိန်တွင် ကြက်တစ်ကောင်ကျောင်းပေါ်သို့ တတ်လာ၏ ။ ကိုရင်သည် အာပတ်သင့်မှာ စိုးသဖြင့် ကျောင်းရှိ ကျောင်းသားတပည့်များအား * ဟဲ့ မောင်ကျောင်းသား မနာကျင်အောင် ကြက်အား အမြီးကိုသာရိုက် ခေါင်းမရိုက်နဲ့ * ဟုပြောလိုက်၏ ။ ကျောင်းသားက အလိုက်သိစွာ သတ်ပြီးး ကြက်သားဟင်ူ လှူလိုက်သဖြင့် အာပတ်လွတ်သွားသောကြောင့် * တပည့်လိမ်မာ ဆရာ အာပတ်လွတ် * ဟုပြောဆိုကြသည် ။ ( ဆောင်ပုဒ် – ဆရာ့ဆန ဖြည့်စွမ်းမှ သိတတ် အလိမ်မာ )
၃ . ဘုရားပြီးက ငြမ်းဖျက်သည်
ဘုရားတည်သောအခါ ငြမ်းဆင်ပြီး တည်ရစမြဲဖြစ်သည် ။ ဘုရားတည်ပြီးသော အခါ ထိုငြမ်းကို ဖျက်ကြသည် ။
ကြီးမားတိုးတတ်ရန် မ စ စောင့်ရှောက်ခဲ့သော ကျေးဇူးရှင်ကို ကြီးပွါးတိုးတတ်သွားသော် ကျေးဇူးကန်းသောအခါတွင်ပြောလေ့ရှိသည် ။ ( ဆောင်ပုဒ် – သူ့ကျေးဇူးရှိပေဖူး ၊ အထူးသိရမည် ။ )
၄ . မမြင်ဖူး မူးမြစ်ထင်
ကျယ်ဝန်းသော မြစ်ကြီး မမြင်ဖူးသောသူသည် မြစ်ငယ် တစ်ခုမြင်ရုံနှင့် ကျယ်ဝန်းသညံ မူးမြစ်ဟုထင်နေကြသည် .။
ပစည်း ဥစာ ၊ ရာထူး အဆင့်အတန်း အတန်အသင့်ရရှိပြီးသူအချို့သည် မြင့်မားပြည့်စုံပြီဟု ရောက်တတ်ကြသည် ။ ( ဆောင်ပဒ် – ဘ၀မြင့်လျှင် လူရယ်ချင် ဆင်ခြင် သတိပြု )
၅ . ဟောင်လွန်းသာခွေးလူမလေး
ဟောင်လွန်းသောခွေးကို လူကြောက်ကြသည် ။ ခဏခဏ ဟောင်လွန်းသောခွေးကို စိုးရွံ့မှုမရှိကြတော့ပေ ။
မကြာခဏ ကြိမ်းဝါးခြိမ်းခြောက်တတ်သူအား အရိုအသေ အကြောက်အရွံ့ မရှိတော့ကြောင်းဆိုလိုသည် ။ ( ဆောင်ပုဒ် – ကြုံးဝါးဟောက်ဟန်း အမြဲကြိမ်း ၊ လူပြိန်းလူညံ့သာ ။ )
( ဥပမာ – ကျောင်းမှာ စာမရလျှင်ရိုက်မယ်လို့ဆရာမက ပြောလိုက်တယ် … စာမရရင် ဒီတစ်ခါရှိပါစေတော့ ဆိုပြီး ဖြစ်ဖန်များလာတော့ ကျောင်းသားက ဆရာမက တစ်ကယ်မရိုက်ပါဘူးကွာ ခြောက်ရုံခြောက်တာပါ ဆိုပြီး မလေးစား မကြောက်ရွံ့တော့ဘူးလို့ပြောတာပါ )
နံပါတ် ( ၂ ) ကတော့ လွဲတယ်ဗျို့ 
သူ့ ဥစ္စာကို၎င်း၊ သူ့ အသက်ကို၎င်း ပရိယာယ် ဆင်တာဖြစ်ပြီး သူ့ ဥစ္စာ သူ့ အသက် ကို ငါရပါမူ ကောင်းလေစွ ဟူသော အကြံသည်ကို သာ
မမြင်ဖူး မူးမြစ်ထင် ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ပြန်တာမှားနေတယ် ထင်တယ်။
အမှား။ ကျယ်ဝန်းသော မြစ်ကြီး မမြင်ဖူးသောသူသည် မြစ်ငယ် တစ်ခုမြင်ရုံနှင့် ကျယ်ဝန်းသညံ မူးမြစ်ဟုထင်နေကြသည် .။
အမှန် ၊ ကျယ်ဝန်းသော မြစ်ကြီး မမြင်ဖူးသောသူသည် မူးကို မြင်ရုံနှင့် ကျယ်ဝန်းသညံ မြစ်ဟုထင်နေကြသည် .။ (မူး ဆိုသည်မှာ ရွှေဘိုခရိုင်တွင်ရှိသော ကာဘိုးဆည်၏ လက်တံကို မူးဟုခေါ်သည်။ ချောင်းသာသာလောက် သာရှိသည်။) ထို့ကြောင့် အဓိပါယ်မှာ မြစ်မမြင်ဘူးသော သူသည် ချောင်းသာသာလောက်သာ ရှိသော မူးကို မြစ်ဟုထင်နေသည်။ တကယ်ဆိုလျှင် မူးမြစ်ဆိုသည်မှာ လည်း ထို ခရိုင်တွင်ရှိသည် သိပ် မကျယ်ဝန်းပါ။ ချင်းတွင်းမြစ်၏ မြစ်လက်တက်သာဖြစ်သည်။
စကားပုံလေး အရမ်းကောင်းပါတယ်။အဲ့စကားပုံလေးက ပညာသားအရမ်းပါပါတယ်။သာမန်ကြည့်ရင်တော့ အဲ့စကားပုံဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ဖြစ်နေပေမဲ့ ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းအရာကို အဓိကအခြေခံသိထားမှဖြစ်မယ်လေ။ဒီစာလေးကိုတင်ပေးထားတဲ့ (Gong Zhu) အကို ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။။
အနက်ပြန်တာလေးတွေက လွဲနေတော့ စကားပုံရဲ့အနှစ်သာရ ပေါ့သွားသလိုဘဲ ။
စာအုပ်ထဲမှာ အဲ့ဒီလိုပဲရေးထားတာ … သမီးက မသိဘူး … ဟီးဟီး … mG သူလုပ်မှပဲ အခြောက်ဖြစ်တော့တယ်နော် နာမည်ကြီးကလည်း ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး … ဒီခါ အနက်မပါပဲတင်မယ် ….